Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Lagu Laayay Dad Shacab ah Ayaa Ka Socda xuduuda Oromada & Somalida.
Dagaalo Lagu Laayay Dad Shacab ah Ayaa Ka Socda xuduuda Oromada & Somalida.
Wararka nagasoo gaadhaya gudaha wadanka Ogadenya ayaa sheegaya in ay ka socdaan dhulka xuduuda Oromada ku teedsan oo dhan dagaalo Isir beegsi ah oo kadhan ah shacabka somaliyeed ee ku dhaqan xuduuda.
Meelaha dagaaladu ka socdaan waxaa kamid ah Gobolada libaan, Nogob, Faafan, Shiniile, iyo Afdheer oo ah afarta gobal ee xadka lawadaaga maamulka oramada, dagaaladan waxaa ka qayb qaadan haya ciidamada policeka oromada ee OPDO & Maleeshiyaad Oromo ah.
Goob jooge kusugan gobolka liibaan gaar ahaan dagmada mooyaale oo idaacada bbcsomali shalay uwaramay ayaa sheegay in dagaal saf balaadhan ah lagusoo qaaday ilaa hadana ugu yaraan 30 ruux oo ciyaal iyo haween ubadan ladilay hanti badana ladhacay ninka Waraysiga bixin hayay ayaa Hadalkiisa waxaa kamuuqday murugo iyo ciil Wuuna ooya hayay.
Hadaba Waxuu hada Khasaaaraha ugu xun ka socdaa gobolka liibaan gaar ahaana Magaalooyinka Chamuq, Malab, Dirre Diima, El Gof iyo Boqorile oo sida la sheegay dadkii daganaa qaarna la laayay qaarna labarakiciyay waxaana Magaalooyinka duleedkooda lagu tababarayaa ciidamo Oromo ah oo xasuuqa shacabka loo carbin hayo.
dagaalka ayaa ah mid Oromadu kudoonayso inay meelaha muhiimka ah Sida magalada mooyaale oo dhacda xadka ogadeniya iyo kenya ahna goob ganacsi kula wareegaan.
Dhamaanba Dhulka laysku haysto dagaalafu ka socdaan ayaa ah Dhul kamida dhulka soomaalida Ogaadeniya, waxaana xusid mudan in gumaysiga Itoobiya afti aan waxba kajirin oo been ah in ka badan 400 oo magalo u qabtay sanadii 2004 oo uu 80% maamulka oramada kuwareejiyay magaalooyin dhul ogadeniya ahaa ilaa hadana Oromo gacanta kuhayso dadkii Somalida ahaa ee lahaana lasooqixiyay.
Colaadan iyo dagaaladan lagu hoobtay waxaa abuuraya kooxda tigrayga ee TPLF ilaa iyo haatana wax xal ah lagama gaadhin dhanaca kale colaadi shucuubta koonfureed waxaa lagu xaliyay wax ka yar maalmo halka colaada soomaalida iyo Oromada aad hada moodo inay sanad sii galayso wax laga qabtay oo muuqdana aysan jirin.
Maamulada daba dhilifka ah ee oramada iyo Somalida ayaan Wali kawaantoobin kicinta iyo iskudirka labada shacab midwalbana kakale ayuu ku eedeeyaa bilowga dagaalada sida dadka rayadka ah sheegeene waxaana hada weerarada wada waa Maleeshiyaad oo Oromo ah oo kooxda OPDO ka amar qaata.
Waxaa waajib ah in sidhakhsa ah loo joojiyo coldaadan labada shacab ee walaalaha ah udhaxaysa waxii khilaaf ahna wada hadal lagu dhameeyo.